भियतनामको यात्रा - यी आधारभूत र आवश्यक सुझावहरू लेख्नुहोस् यात्रा समाचार
यी सुझावहरू लेख्नुहोस् यदि तपाईं भिसासँग वा भिसा बिना यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ
तपाईं सोच्नुभएको छ भियतनामको यात्रा? त्यसोभए तपाईंलाई प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि जस्तो कि तपाईंलाई भिसा वा एक विशेष खोप चाहिन्छ वा अन्य धेरै, जुन हाम्रो चिन्ताको कारण हुन सक्छ। यस कारणका लागि, आधारभूत सुझावहरूको श्रृ like्खलाको जस्तो केही छैन, त्यसैले तपाईं आरामदायी र तपाईंको अद्भुत यात्राको मजा लिन सक्नुहुनेछ।
शंकाहरू जहिले पनि सामान्य हुन्छ जब हामी प्याक गर्छौं र जान्छौं संसारको अर्को पक्ष। उत्तम कुरा भनेको सबै कुरा खाली छ र यसलाई बाँधेर राख्नुपर्दछ, नयाँ साहस शुरू गर्नु अघि। भियतनाम धेरै पर्यटकहरूको इच्छा हो र हामी आश्चर्यचकित छैनौं। के तपाई आफैले खोज्न चाहानुहुन्छ?
1 के मलाई भियतनाम भ्रमण गर्न भिसा चाहिन्छ?
2 भिसा प्रक्रिया गर्नको लागि आधारभूत आवश्यकताहरू
3 भियतनाम यात्रा गर्नु अघि खोपहरू
4 के म अनलाइन भिसाका लागि आवेदन दिन सक्छु?
5 सँधै यात्रा बीमा लिनुहोस्
6 ब्याकप्याकका लागि अप्ट
7 भियतनाममा पैसा
के मलाई भियतनाम भ्रमण गर्न भिसा चाहिन्छ?
यो ती मध्ये धेरै जसो बारम्बार श doubts्का लाग्छ र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन। तर दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि तपाइँसँग छ भने स्पेनिश पासपोर्ट र त्यस देशमा तपाईंको बसाई १ 15 दिन भन्दा कम छ, त्यसपछि तपाईंलाई आवश्यक पर्दैन भियतनाम भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्। यदि तपाईं यी दिनहरू उल्लेख गर्नुभयो भने, त्यसपछि तपाईंसँग धेरै रूपहरू छन्। एकातिर, एक महिनाको लागि रहनका लागि जुन दुबै एयरपोर्ट र अन्य प्रकारका सीमानाहरूका लागि मान्य हुनेछ, जबकि अर्को विकल्प तीन महिनाको अवधिको लागि हो। यस अवस्थामा, यो केवल एयरपोर्टको लागि लागू हुनेछ।
भिसा प्रक्रिया गर्नको लागि आधारभूत आवश्यकताहरू
हामीले सँधै बिर्सनु हुँदैन कि प्रत्येक देशको आफ्नै आवश्यकता हुन सक्छ। त्यसकारण, यसलाई सामान्यीकरण गर्न सकिदैन र यो उपयुक्त छ कि हामी जहिले पनि वेबसाइटको वेबसाइटमा जानकारी खोज्छौं हाम्रो देशमा भियतनामको दूतावास। किनभने, उदाहरणका लागि, अर्जेन्टिनाका लागि यो भिसा लिन अनिवार्य छ, तर संग इटालियन नागरिकता हो, यसले तपाईंलाई स्पेनी पासपोर्टको साथ उही बिन्दुमा स्वागत गर्दछ र १aदिन बिना भिसा बिना प्रवेश गर्न सक्दछ। यो जानेर, यो याद राख्नुहोस् कि आधारभूत आवश्यकताहरूको रूपमा हामीलाई राहदानी कम्तिमा months महिना पुरानो चाहिन्छ। हामी दूतावास द्वारा प्रदान गरिएको फारम पनि भर्नेछौं र राहदानी फोटो डेलिभर हुनेछ। तपाईं पनि गन्तव्य आवास मा आरक्षण अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र पछिल्ला तीन बर्षमा भियतनामबाट निकाला गरिएको छैन।
भियतनाम यात्रा गर्नु अघि खोपहरू
यदि तपाईंसँग पहिले नै भिसा छ भने, यदि आवश्यक छ र तपाईं वास्तवमै यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि त्यहाँ छैन अनिवार्य खोपहरू। तर जहिले जहिले हुन्छ, सिफारिस गरिएका केहि हुन्छन्। यसमा पहेलो ज्वरो वा हेपाटाइटिस ए साथ साथै बी, साथै टाइफाइड ज्वरो पनि पर्छ। लामखुट्टे भगाउने जहिले पनि धेरै आवश्यक हुन्छ साथै केसलाई केहि आइबुप्रोफेन सहित बोक्नु आवश्यक पर्दछ।
के म अनलाइन भिसाका लागि आवेदन दिन सक्छु?
आज, हाम्रो अधिकारमा इन्टरनेटको साथ, सबै कुरा सरल छ। तसर्थ, तिनीहरू पहिले नै अवस्थित छन् वेब पृष्ठहरू जुनबाट यस प्रक्रियालाई प्रक्रिया गर्न। तपाईं यसलाई दिनको २ hours घण्टा गर्न सक्नुहुन्छ, डिजिटल अनुरोधहरूका लागि धन्यवाद। ती मा तपाईं आफ्नो डाटा लेख्न र आवश्यक रकम तिर्न हुनेछ। अवश्य पनि, जब सम्म तपाईं आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ, यदि तपाईं एक महिना भन्दा बढीको लागि देशमा हुन चाहानुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईंले दूतावासमा जानु पर्छ।
सँधै यात्रा बीमा लिनुहोस्
यो सत्य हो कि केहि पोइन्टहरू जहिले पनि यात्रा गर्नु अघि धेरै स्पष्ट हुनुपर्दछ। ती मध्ये एक हो भियतनाम भिसा आवश्यकताहरू र अर्को, यात्रा बीमा लिन। किनभने हामीलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन कि त्यहाँ के भइरहेको छ वा त्यहाँ के हुन्छ। जस्तो कि हामी राम्ररी सोच्न सक्छौं, विश्वका केही भागहरूमा डाक्टरहरू र स्वास्थ्यको समस्या धेरै महँगो छ। के हामी त्यो जोखिम लिन जाँदैछौं? सबै भन्दा राम्रो कुरा हो।
ब्याकप्याकका लागि अप्ट
यो सत्य हो कि हामी सुटकेसहरू प्रयोग गर्दछौं, तर सत्य यो हो कि भियतनामको यो यात्रा अझ आरामदायी हुनेछ यदि हामी आफैंलाई ब्याकप्याकले बोक्न दियौं भने। जस्तो सुटकेसहरू ओसारपसार गर्नु सधैं सजिलो हुँदैन यसको गल्लीहरूमा। अवश्य पनि, यो सबै सधैं यात्रिको स्वादको लागि हुन्छ।
यसको मुद्रा दाong हो, त्यसैले एक यूरो २ 27.000,००० डो। हुन्छ। तपाईंले हातमा बिलहरूको धेरै पाउनुहुनेछ, तर हामीले देख्यौं, परिवर्तन एकदम सस्तो छ। त्यसोभए तपाईले एक युरो भन्दा बढीको लागि खान सक्नुहुन्छ, तपाईले फेला पार्नुहुने धेरै स्टालहरूमा। त्यसैले तपाईं भियतनामको यात्रामा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई परिवर्तनको बारेमा सोच्न अलि गाह्रो लाग्छ भने, मोबाईल अनुप्रयोगको प्रयोग जस्तै केहि पनि छैन। के तपाईंसँग भियतनाम भ्रमण गर्न र अन्य संकेतहरू खाली गर्न भिसा छ? त्यसोभए यो समय छिटो-हकदार छुट्टीको आनन्द लिने हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » यी सुझावहरू लेख्नुहोस् यदि तपाईं भिसासँग वा भिसा बिना यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ
सोरियामा के हेर्ने
मोरक्कोको क्यासाब्लान्का हुँदै पैदल यात्रा